Fizahan-tany aorian'ny COVID: zava-misy mamy mangidy nampahafantarin'ny talen'ny mpiara-miasa WTN Dr. Taleb Rifai
Home » fanorenana » Fizahan-tany aorian'ny COVID: zava-misy mamy mangidy nampahafantarin'ny talen'ny mpiara-miasa WTN Dr. Taleb Rifai
Tsy hiverenana amin'ny ara-dalàna fotsiny ny asa fizahan-tany.
Dr. Taleb Rifai, sekretera UNWTO teo aloha - Jeneraly dia manana fahitana matanjaka amin'ny fahitany ny fivoaran'ny indostria.
Ny fitohizan'ny fizahantany dia hanana anjara toerana amin'ny ho avy ny ara-dalàna vaovao ho an'ny sehatry ny fizahan-tany.
Dr. Taleb Rifai dia manao satroka maro. Ny toerana misy ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha dia misy ny Birao Afrikana fizahan-tany sy ny Project Hope, Ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, World Tourism Forum Institute. , Global Resilience and Crisis Management Center, ary izy no mpiara-miasa amin'ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN)
Jereo ny Dr. Taleb Rifai izay mitarika amin'ny fanambarana amin'izao tontolo izao ny marina momba ny ho avin'ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ity fahamarinana ity no tokony ho fototry ny rahampitso tsaratsara kokoa
Resadresaka telo, tantara telo avy amin'ny mpanolotsaina iray ho an'ny fizahantany manerantany.
WTTC, UNWTO dia tsy vonona ny hahatsapa ny tena zava-misy amin'ny fijerin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany COVID-19. Tsy hiverina amin'ny zavatra fantatsika izany. Enga anie ny marina hanafaka antsika. Ity no famantarana nomen'ny mpanolotsaina laharana voalohany manerantany, Dr. Taleb Rifai.
Dr. Taleb Rifai dia niasa ho sekretera jeneralin'ny UNWTO roa hatramin'ny 31,2017 desambra XNUMX ary mbola nandray ny iray amin'ireo olona nanan-kery indrindra teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Iray amin'ireo toerana maro tafiditra amin'ity teratany Jordaniana ity, amin'ny maha-co-chairman an'ilay vao niforona azy Tambajotra fizahan-tany manerantany nanao fiatraikany lehibe tao amin'ny fanarenana ny dia adihevitra natombok'i WTN.
Jereo hoe ahoana no fahitan'ny olona manana fahefana any amin'ny fireneny i Dr. Rifai ary niainany nandritra ny fitsidihan'ny fanjakana tany Costa Rica fony izy mbola sekretera jeneralin'ny UNWTO. ,
Niatrika ny krizy ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'ny fizahan-tany izao tontolo izao, dia niverina avy tamin'ny fisotroan-dronono mendrika azy i Dr. Rifai ary mpanolo-tsaina maro an'izao tontolo izao. Noho ny tsy fahaiza-mitarika mahomby ao amin'ny UNWTO amin'izao fotoana izao, Dr. Rifai no mpanetsika mangina sy mikorontana any aoriana. Vitany izany satria ny lova navelany tamin'ny maha olom-pirenena eran-tany azy. Ny fizahantany dia indostrian'ny fanantenana sy fanantenana.
Tonga saina izy, fa tsy hiverina amin'ny taloha fotsiny ny fizahantany. Dr. Rifai dia manana vina amin'ny ho avy aorian'ny COVID-19. Ny tontolo iainana sy ny faharetana dia manana andraikitra lehibe amin'ity vina ity.
Hoy izy: "Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia sehatra mpandala ny nentin-drazana sy miadana tokoa. Nahavita nandefa lehilahy ho amin'ny volana izao tontolo izao talohan'ny namoronany kodiarana roa tamin'ny valizy. ”
Ny taom-piainana biodiversity sy fizahan-tany & fampandrosoana maharitra dia tamin'ny taona 2017. Henoy izay nolazain'i Dr. Rifai fony izy mbola sekretera jeneralin'ny UNWTO.
Amin'ny taona 2020/21 dia hafa be izao tontolo izao. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity niaraka tamin'ny oniversite iray ho an'ny tetikasa fikarohana dia nilaza ny Dr. Rifai hoe: "Ny faharetana dia tsy resaka mitovy. Tokony ho fantatrao ny fomba hitombo. ”
“Azo iadian-kevitra raha tsara tarehy kokoa i Manhattan talohan'ny nananganana Skyscrapers. Tsy manohitra ny Skyscrapers aho, fa manan-danja amin'ny toerana sy ny fomba fananganana azy ireo. ”
Ny faharetana sy ny fizahantany dia momba ny olona. Ny rindrina eo anelanelan'ny olona dia tsy maintsy ampidinina, ny olona mila mifanerasera.
Dr. Taleb dia tsy mieritreritra ny hiverenan'izao tontolo izao amin'ny laoniny ary hamoaka ny heviny amin'ity tafatafa ity miaraka amin'ny mpampahalala vaovao Portiogey. Dr. Rifai dia hiresaka momba ny fiaramanidina, fitsangantsanganana an-tsambo, toeran-kaleha ary hanazava ny antony tsy hiverenan'ny fizahan-tany amin'ny toerana nisy azy fa handroso ihany.